Soosaarayaasha Soosaarka Caaga - Shirkadaha Shiinaha ee Warshadaha Sameeya & Warshadaha
Dhalada Caagagga ah ee loo yaqaan 'Reptile Plastic Bowl Bowl NW-17 NW-18
Magaca Badeecada Magaca Alaabada Caagga ah ee Bacaha Alaabada Sifeynta Alaabada Alaabada Alaabada Saxda midabka NW-17 190 * 110 * 14mm Caddaan NW-18 132 * 80 * 10mm Alaabada Caddaan ee Alaabada PP Alaabada Lambarka NW-17 NW-18 Tilmaamaha Saameynta Qaabka Sahal, qurux iyo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Si fudud ayaa loo nadiifin karaa. Hordhaca Alaabta Weelka wax lagu cuni karo waxaa laga sameeyay maadada PP Maaddooyinka sunta ah si loo hubiyo bey'ad amaana oo caafimaad leh
Caagagga Weelka Caagga ah ee loo yaqaan 'Restile Cave Cave NA-13'
Magaca Badeecada Soocelinta Caagagga ah ee Caagagga ah ee Caagga ah Suuqa Alaabada Nooca Alaabada Nooca NA-13 160 * 100 * 73mm Badeecada Alaabada Cuntada PP Lambarka alaabada NA-13 Waxyaabaha Tilmaameedka ah Qaab fudud, qurux badan oo waxtar leh. Adeegsiga balaastiig tayo sare leh, oo aan sun lahayn iyo wax aan dhadhan lahayn. Godadka qarada caagga ah ee lagu gado Sharraxaado badan iyo qaabab ayaa la heli karaa. Hordhaca Alaabta Godka godka waxaa laga sameeyay qalab 'PP Waxyaabo la taaban karo oo loogu talagalay dadka wax qarinaaya
Meel qafis qafis u eg
Sheyga Magaca Turtle Basking Island Tilmaamaha Sheegashada Alaabta Wax soo Saarka 172 * 138 * 75mm Waxyaabaha Alaabada Cad ee PP Waxyaabaha alaabada NF-06 Waxyaabaha Tilmaamaha Isticmaalka agab tayo sare leh, aan sun lahayn iyo dhadhamin, waara oo aan miridhku lahayn. Wuxuu ku yimaadaa geed qumbaha caag ah iyo xero quudinta. Waxay u adkeysan kartaa culeys dhan 2 kg. Waa lagu dhisi karaa lugaha badan (waxay ubaahantahay inaad iibsato lugaha si gooni gooni ah). Hordhac Waxsoosaarka ayaa ku habboon dhammaan noocyada kuniyo biyo dhanaanta iyo qulqulaha biyaha-semi ...
Quudh hal weel lagu qufuyo
Magaca Badeecada Weelka korantada isku laalaya. Sifeynta sheyga 7.5 * 11cm Waxyaabaha Alaabada Cagaaran ABS / PP Lambarka Alaabta NW-33 Tilmaamaha Alaabta Tilmaanta adag ee koobka, hagaaji baaquli quudinta, xasilloon oo aan dhaqaaqayn. Garabka maadada ABS, ma fududa in la tarmo. Muuqaal cunno oo daahfuran oo xammaaliyeyaasha ah si ay u daawadaan cuntada. Wanaagsan oo u leexiya laba dariiqo meelaynta. Hordhaca Alaabta Xarkaha Qufullaha ku dhegan ee laalaaban yahay ayaa qabta maadada ABS, oo saxanka cuntada waa maadada PP, halka ...
Laba jibbaar oo ku laalaada quudiyaha
Magaca badeecada laba jibbaaran oo ka laalaadaya quudiyeyaasha Waxyaabaha Tilmaamaha Alaabada Badeecada 12.5 * 6.5cm Waxyaabaha Alaabada Cagaaran ABS / PP Lambarka Alaabta NW-32 Tilmaamaha Alaabada Alaabooyinka xoog u nuugida, hagaaji baaquli quudinta, xasilloon oo aan dhaqaaqayn. Garabka maadada ABS, ma fududa in la tarmo. Muuqaal cunno oo daahfuran oo xammaaliyeyaasha ah si ay u daawadaan cuntada. Iyada oo laba koob oo lagu meeleeyo biyo ama cunto. Hordhac Wax soo Saarka Xarkaha Qufullaha ee laalaadahan ayaa dhejinaya maadada ABS, oo saxanka cuntada waa PP ma ...
Magaca sheyga Cadeynta-Cadaynta qufulka sheyga Caddaymaha sheyga Midabka 9 * 6 * 3.5cm Waxyaabaha sheyga muuqda Way fududahay in la isticmaalo oo la isu tago. Cabbir macquul ah, ha ku celceliyaan kuwa xayawaanku si farxad leh u cunaan. Hordhac Alaabta Iyaga oo leh qaab jilicsan oo dusha sare ah, oo leh qaab baxsashada oo looga hortago wasakheynta tayada biyaha iyo deegaanka ka dib dhimashada cuntada nool. Hufan d ...
Balaastikada Weelka Weyn ee Weyn
Magaca Badeecada Wejiga weyn ee Wejiga ka sameysan ee Weelka loo yaqaan Soosaarka badeecada 37 * 22.5 * 2cm Buluug / Buluug / Noctilucent Waxyaabaha sheyga PP Waxyaabaha Lambarka NW-29 Waxyaabaha Tilmaamaha Seddexda midab ee lagu doorto cabirka weyn iyo fududahay in lagu nadiifiyo Badqabka waxyaabaha cayayaanka Hordhaca Alabadan caagga ah ayaa la sameeyay ee maaddada loo yaqaan 'PP' oo loo isticmaalo sidii baaquli biyo ah iyo weelka cuntada
Bowl Biyo Caag ah oo Toos ah
Magaca sheyga Soosaarka Bijiyaha Caaga ah ee Caaga Biyo Kala Soocaya Alaabada Alaabada 21 * 19.5 * 2cm Buluug / bunni / Noctilucent Waxyaabaha sheyga PP Alaabada Lambarka NW-28 Waxyaabaha Tilmaamaha Seddexda midab ee lagu doorto Fudud oo nadiifin cusboonaysiinta biyaha otomatiga ah ayaa ah mid kufiican oo nadiif ah Waxsoosaarka Alaabta baaquli waxay ka samaysan tahay maadada 'PP'
Bowl caag ah oo yar oo Caag ah
Magaca Badeecada Alaabada yar ee Caagaga Caagaga ah Boodhadhka Alaabada sheyga 12 * 8.5 * 2cm Buluug / Buluug / Noctilucent Waxyaabaha sheyga PP Waxyaabaha Lambarka NW-27 Waxyaabaha Tilmaamaha Seddexda midab ee lagu xusho cabirka yar ee xamaarayaasha yar yar Badbaadi u leh waxyaabaha xaraashka Soosaarka Alaabada caagani waxay ka kooban tahay Qalabka 'PP' Waxaa loo isticmaalaa sidii baaquli biyo iyo weelka cuntada
Weel weyn oo ka Baxsan Caddaynta Weelka caagga ah
Magaca Badeecada Weyn ee Wejiga-ka-caddeynta Weelka caagga ah ee Sharaxaadda Alaabada Alaabada Alaabta 13.5 * 9.5 * 3.8cm Caddaan / Madow Alaabada Alaabta PP Waxyaabaha Lambarka NW-25 Sifooyinka Alaabada Labbo midab oo lagu xusho qeexitaanno fara badan iyo wajiyaal fudud oo nadiif ah Hordhac Baanbadda dhaldhalaalka ah waxaa laga sameeyay Waxyaalaha PP Maaddooyinka sunta ah si loo xaqiijiyo jawi aamin ah oo caafimaad leh
Caddayn Dhex-dhexaad ah oo weel caag ah
Magaca sheyga Dhexdhexaad-cadaynta Cadaynta Balaastikada Balaastikada Alaabada Alaabada Soosaarka Alaabada 9.8 * 7.5 * 2.8cm Caddaan / Madow Alaabada Alaabta PP Alaabada Lambarka NW-24 Astaamaha Alaabada Laba midabo oo lagu xusho qeexitaanno fara badan iyo wajiyaal sahlan oo nadiif ah Hordhac Baanbadda dhaldhalaalka ah waxaa laga sameeyay Waxyaalaha PP Maaddooyinka sunta ah si loo xaqiijiyo jawi aamin ah oo caafimaad leh